Caalamka Online » Ceel Caade oo caawa ay ku hoyaneysa Xoogag ka tirsan Alshabaab
Ceel Caade oo caawa ay ku hoyaneysa Xoogag ka tirsan Alshabaab
November 29, 2017 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Wararka ka imaaanayaa Magaalasa Baladwayne ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta uu Dagaal ka dhacay degaanka Ceel-Cadde oo ka tirsan Gobalka Hiiraan, kaasi oo u dhaxeeyay Xoogag ka tirsan Ururka Shabaab iyo Maleeshiyaad hubeysan oo degaanka ah.
Shabaab ayaa weerar dhowr jiho ah oo saf balaaran ah waxa ay ku qaadeen degaanka, taasi oo markii dambe suuragelisay in gabi ahaan ay gacanta ku dhigaan degaanka, kana baxaan dadkii degaanka ahaa ee hubeysnaa.
goobjoogayaal ku sugan deegaanka Ceel Caade ayaa warbaahinta gudaha u sheegeen in ay arkayeen xoogag hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab, kuwaas oo watana Gaadiidka dagaalka, waxa ayna intaas ku dareen in gabi ahaan ay la wareegeen meelaha ugu muhiimsan degaanka.
Maamulka degaanka Ceel-Cadde ayaa sidoo kale xaqiijiyeen in Shabaab ay la wareegeen degaanka, balse Ciidamada Dowladda Federaalka iyo Maamulka Gobolka ay wadaan abaabul dagaal.
Degaanka Ceel Cadde oo qiyaastii 70-KM dhanka Galbeed uga beegan Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Caawa ku huyanaysa Gacanta Uruka Alshabaab.